.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Girl Flash Effect များ ဒေါင်းရန် ၁
Girl Flash Effect များ ဒေါင်းရန် ၁
Flash Song တွေ ဖန်တီးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဒီတစ်ခါ Girl Flash Effect လေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
စုစုပေါင်း Effect ပုံလေးတွေ ၅၀ ပါ။ Flash Song တွေ လုပ်တဲ့အခါ ဒီ Effect လေးတွေက အရမ်းကို အသုံးဝင်မှာပါ။
Google Drive ကပဲ တင်ပေးထားတာ ဖြစ်လို့ ဒေါင်းနည်းတွေကတော့ အားလုံး သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အပိုတွေ
သိပ်မပြောတော့ပါဘူး။ Girl Flash Effect လေးတွေ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်က လင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါကြောင်း..
Effect တွေကိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း တစ်ခုစီပဲ တင်ပေးထားပါတယ်နော်.. စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ဒေါင်းယူလိုက်ကြပါ။
Download: Girl Flash Effect များ ဒေါင်းရန် ၁